For Gifts Card, Express mails, Letters, Invitation Card, Invoice, Statement, within (4) or (5) days after collecting the shipments. Open six days inaweek (off on Sundays and also off on gazette holidays).
Premier Priority Mail Service
For Gifts Card, Express mails, Letters , Invitation Card , Invoice, Statement, within (2) or (3) days after collecting the shipment. Open six days inaweek (off on Sundays and also off on gazette holidays).
Pick up time - 9:00 am to 16 :00 pm
Delivery time - 9:00 am to 17:00 pm ( Service Open Daily)
Delivery notification to shipper
Pick up time - 8:00 am to 12 :00 pm
Delivery time - 12:00 pm to 17:00 pm ( Service Open Daily)
UCL is representing in the following cities
နှစ်ပေါင်းများစွာ အမြန်ချော-စာပိုု့ လုုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူများ ဦးစီးဆောင်ရွက် ၍ သွက်လက်ရည်မွန်ဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်သော၊ ယုံကြည် ကျွမ်းကျင် စိတ်ချရသော ၀န်ထမ်းများဖြင့် အကောင်းဆုံး ၀န်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။
ဖုန်းဆက်ရုံဖြင့်စာပို့သူထံ အမြန်ဆုံးလာရောက် သယ်ယူပေးခြင်း။
ပေးပို့လိုသော လိပ်စာရှင်ထံသို့ နေ့ချင်းရောက် ၊နောက်နေ့ သွားရောက်ပို့ပေးခြင်း။
ပေးဝေပြီးကြောင်းကို ပေးပို့သူများထံ သို့ ဖုန်း၊ စာတိုဖြင့် အကြောင်းပြန်ကြားပေးခြင်း။
အထူးဝန်ဆောင်မှု (သို့) အထူးသတ်မှတ်ချက်ရှိသော အချိန် (သို့) ပုံမှန်သတ်မှတ်ချက် အချိန်အတိုင်းတိကျစွာ လာရောက် သယ်ယူပေးပို့နိုင်ခြင်း။
ပေးပို့သောစာ၊ ပစ္စည်းတို့ကို ပျက်စီးပျောက်ဆုံးခြင်းမရှိစေရန် တိကျသေသပ်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
အလေးချိန်၊ အရွက်အစား ၊ အရေအတွက် ကန့်သတ်ချက်မရှိ ပေးပို့နိုင်ခြင်း။
အင်တာနက်၊ ဖုန်းတို့မှတဆင့်ရောက်ရှိမှု အခြေအနေကို မိမိကိုယ်တိုင်သိရှိနိုင်ခြင်း။
ဘဏ်များ မှ တဆင့် ငွေပေးချေ မှု၊ လက်ငင်း၊ လပေး စသည်တို့ ဖြင့် ပေးချေ နိုင်ခြင်း။
Copyright © UCL 2022 | Log In